SADC Yotarisirwa Kuzeya Nyaya yeZimbabwe kuAngola
Chivabvu 29, 2012
Sangano reSADC riri kutarisirwa kuita misangano miviri yakakosha kuti ritarise zvinhu zviri kunetsa mudunhu rekuchamhembe kweafrica, kusanganisira Zimbabwe.
Pachange paine misangano miviri, wekutanga uri weSADC Troika, uyo unonzi uchazeya mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mapato ose matatu ari muhurumende yemubatanidzwa achange ari kumusangano uyu achipa humbowo hwemamiriro akaita zvinhu.
Mushure meSADC Troika, iyo ichaitwa nemusi weChina, kuchaitwa zvakare musangano wechimbichimbi weSADC neChishanu. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti SADC ichatarisa nyaya yekudyidzana kwenyika dziri pasi payo asi pari kutarisirwawo kupirwa zvinenge zvabuda kumusangano weSADC Troika pamusoro pegakava remuZimbabwe.
Mutungamiri weSouth Africa, uye vari mutongi gava panyaya yeZimbabwe, VaJacob Zuma, vakatumira nhumwa dzavo kuZimbabwe neMuvhuro kunoita hurukuro pamberi pemisangano miviri iyi.
Vane ruzivo nezvemusangano wenhumwa dzaVaZuma nevari kutungamira mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa vanoti mapato matatu aya ari kuratidza kusafara nekunonoka kuri kuita nhaurirano idzi.
Asi Zanu-PF ichitungamirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, VaEmmerson Mnangagwa, avo vange vakamirira gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vakati vari kuda kuti sarudzo dziitwe gore rino.
Asi vemapato eMDC maviri vanoti hakuna sarudzo dzinoitwa pasina kuvandudzwa zvinhu zvakaita semitemo yesarudzo, uye kusapindira munyaya dzezvematongerwo enyika kuvanhu vachiri kushanda muchiuto nemuchipurisa. Mapato aya ari kukurudzira VaZuma kuti vatsiure VaMugabe kuti vasarambe vachitaura nezvesarudzo sezvo zvave kukonzera mhirizhonga munyika.
Asi vamwe vakuru muZanu PF vanoti VaMugabe vari kutarisirwa kuudza vamwe vavo muSADC kuti vave kuda kuti sarudzo dziitwe nechimbi chimbi sezvo hurumende yemubatanidzwa isiri kushanda. Asi vakuru muhurumende yeSouth Africa vanoti VaZuma havasi kutambira kurudziro yaVaMugabe.
Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vaudza Studio 7 kuti VaZuma vari kutarisirwa kusuma vakuru veSADC nezvemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vati hazvisati zvajeka kuti VaZuma vachasangana here nevari kutungamira mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa vari kutarisirwa kumusangano weSADC.